यो तिनीहरूको गल्ती होईन, यो तपाईंको हो | Martech Zone
यो तिनीहरूको गल्ती होइन, यो तपाईंको हो
सोमबार, अगस्ट 21, 2006 मंगलवार, अगस्त 22, 2006 Douglas Karr
म फेरि एक पटक द्वि घातुमानको बीचमा फेला पार्छु, अहिले मेरो प्लेटमा चार साथ।
मैले उठाए सानो नयाँ ठूलो छ, सेठ गोडिन द्वारा, यस सप्ताहन्तमा। श्री गोडिनले मलाई आश्चर्यचकित पार्नुभएता पनि मैले यसमा आनन्द लिइसकेको छु। मैले पुस्तकको बारेमा अलि बढी पढेको भए, मैले याद गरें कि त्यो सामग्री उनको कार्यको संकलन हो ... मलाई लाग्दछ कि यो एकदमै 'ग्रेटेस्ट हिट्स' सुन्नु जत्तिकै हो, सबै गीतहरू सुन्न पाउँदा… तर तपाईं किन त्यसो गर्नुभएन भनेर सोच्दै तपाईको शेल्फमा भएको सबै CD हरू सुन्नुहुन्न।
दिनको अन्त्यमा, मैले श्री गोदिनबाट पढेको वा सुनेको धेरै बिर्सें। यो त्यस्तो चीज हो जुन हामी सबैले भोग्दछौं। तपाईलाई हरेक पुस्तक कति याद छ? भाग्यवस, म हार्डकभरहरू खरीद गर्दछु किनकि म प्राय: पुरानो पुस्तकहरू लिन्छु र ती मार्फत प्रेरणा र विचारहरूको लागि ब्राउज गर्छु। यो ती मध्ये एक पुस्तक हो। यदि मैले यस पुस्तकलाई मात्र लिने र मैले पढ्ने प्यासेजबारे पढ्ने गर्छु भने, मैले तिर्ने १० गुणा मूल्य भएको छ।
श्री गोडिन एक अविश्वसनीय प्रतिभाशाली लेखक हुन् - प्राय जसो जटिल परिस्थितिहरूलाई सरल शब्दहरूमा राख्छन् जुन तपाईं कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै अन्य लेखकहरूले उहाँ जस्तो प्रेरणा गर्दैनन्। र म निश्चित छु कि धेरै अन्य लेखकहरु सँग निम्न छ जुन श्री गोडिनले गर्छन्। उसको पठनबाट तपाईले के गरिरहनु भएको गलत वा सही हो भनेर बताउँदैन, उहाँ केवल प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ र तपाईको परिस्थितिलाई अगाडि बढाउने कुरा बताउनुहुन्छ।
पृष्ठ १ On मा, सेठ भन्छ:
यदि तपाइँको लक्षित दर्शकहरु सुन्न छैनन्, यो तिनीहरूको गल्ती होईन, यो तपाइँको हो।
त्यो ठूलो जस्तो लाग्दैन वाह, तर यो वास्तवमै छ। कथन बिभिन्न परिसरको संख्यामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ:
यदि तपाइँका ग्राहकहरू सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्दैनन् भने, यो तिनीहरूको गल्ती होइन, यो तपाइँको हो।
यदि तपाईंको सम्भावितहरूले उत्पाद खरीद गरेनन्, यो तिनीहरूको गल्ती होइन, यो तपाईंको हो।
यदि तिनीहरूले तपाइँको वेबसाइट भ्रमण गर्दैनन्, यो तिनीहरूको गल्ती होईन, यो तपाइँको हो।
यदि तपाइँका कर्मचारीहरूले सुन्दैनन् भने, यो तिनीहरूको दोष होइन, यो तपाइँको हो।
यदि तपाईको हाक सुन्दैनन् भने, यो तिनीहरूको गल्ती होइन, यो तपाईको हो।
यदि तपाईंको अनुप्रयोगले काम गर्दैन भने, यो तिनीहरूको गल्ती होइन, यो तपाईंको हो।
यदि तपाईंको जीवनसाथी सुन्दैनन् भने, यो तिनीहरूको गल्ती होइन, यो तपाईंको हो।
यदि तपाइँका बच्चाहरूले सुन्दैनन्, यो तिनीहरूको गल्ती होईन, यो तपाइँको हो।
यदि तपाईं खुशी हुनुहुन्न भने, यो तिनीहरूको गल्ती होइन, यो तपाईंको हो।
मलाई लाग्छ कुरा के हो, के हो तपाईं यसको बारेमा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? सेठ जान्छ:
यदि एउटा कथाले काम गरिरहेको छैन भने, तपाइँ के गर्नुहुन्छ परिवर्तन गर्नुहोस्, होइन कति चर्को सोरले कराउनुहुन्छ (वा थोरै)।
तपाइँ के गर्नुहुन्छ परिवर्तन गर्नुहोस्। तपाईंसँग परिवर्तन गर्ने शक्ति छ। परिवर्तनको मतलब यो होइन कि तपाईंले यो एक्लै गर्नुपर्दछ, यद्यपि। यदि तपाईंलाई आवश्यक छ भने मद्दतको लागि सोध्नुहोस्।
यो प्रयास होईन कि मानिस आश्चर्यजनक छ